Wasaarada Caafimaadka KG oo dignin u dirtay xarumaha caafimadka gobalka - Awdinle Online
Wasaarada Caafimaadka KG oo dignin u dirtay xarumaha caafimadka gobalka
March 22, 2020 (Awdinle Online) –Wasaaradda Caafimaadka KGS Oo Soo saartey Warsaxaafadeed ayaa Xaruumaha Caafimaadka Gobolka Kamamnuucdey inaysan Baari karin Wax Laxiriira Kiisaska Cudurka Coronovirus .
Wasaaradda Caafimaadka dowlad goboleedka konfur galbed somaliya ayaa ayaa digniin u dirtay xarumaha caafimadka gobalka bay ka howl gala .
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka konfur galbed ayaa waxaa lagu sheegay in Xaruumaha Caafimaadka Gobolka laga mam nuucay inaysan Baari Karin Wax Laxiriira Kiisaska Cudurka Coronovirus .
Wasaarada ayaa sidoo kale sheegtay in Kaliya Wasaaradda Caafimaadka Oo Kaashaneysa Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay Baari Karaan Caabuqa COVID-19.
Marka la joogo siyaasadda caafimaadka iyo dhaqaalaha waxaa jirta oraah aad u caan baxday oo tiraah “Ka hortagga ayaa ka wanaagsan daweeynta”. Tan ayaa u muuqata in ay tahay midda nolosha dad badan badbaadin karta, kana hortagi karta walaaca iyo cabsida aan loo baahneyn ee Soomaaliya ka jirta.
Ka hortaga waxa uu u baahan yahay marka u horreysa xog xaqiiqda ku saleysan oo waqtigeeda la joogo, taas oo ay si dhow u la socoto waxqabadyo siyaasadeed oo jiheysan oo si gaar ah loogu talo galay dalalka soo kabanaya sida Soomaaliya oo leh adeeegyada iyo kaabayasha caafimaaadka ay aad u hooseeyaan.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ay soo saartay Wasaarada Caafimaadka.
Previous articleItoobiya oo la wareegtay qalab Caafimaad oo loo qoondeeyay Wadama Afrika.
Next articleTaliyaha Booliska Degmadda Afgooye iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa oo qarax lagu dilay